DEG DEG: Juventus oo xaqiijisay inay Alvaro Morata dib ugu celineyso Real Madrid – Gool FM
DEG DEG: Juventus oo xaqiijisay inay Alvaro Morata dib ugu celineyso Real Madrid
(Turino) 21 Juunyo 2016. Madaxa fulinta kooxda Juventus Beppe Marotta ayaa tilmaamay in Alvaro Morata uu dib ugu laabanayo Real Madrid xagaagan.
Kooxda reer Spain ayaa kula jirtay weeraryahanka heshiis ay dib ugu iibsan karto, sida uu sheeganayana Beppe Moratta Los Blancos ayaa isticmaaleysa heshiiskaasi si ay dib ugu celiso dhaliyaha reer Spain gegidii uu ku soo bilaabay ciyaaraha ee Santiago Bernabeu.
Wuxuu kaloo sheegay Moratta in kooxdiisu Juventus ay markale isku dayi doonto in Alvaro Morata ka soo iibsato Real Madrid.
Sikastaba, labadii sano uu joogay Morata magaalada Turino ay ka dhisan tahay Juventus ayaa u muuqda inay soo gabo gabowday iyadoo uu Beppe Moratta uu xaqiijiyay in Real Madrid ay qorsheynayso inay ka shaqeysiiso heshiiska ay dib ugula saxiixaneyso weeraryahanka.
“Real Madrid ayaa nagu soo war galisay u jeedkooda ku aadan inay ka shaqeysiiso xuquuqda ay dib ugu iibsaneyso Morata, waxaynu iminka sugeynaa uun dalabka oo qoran.”, sida ayuu ku waramay madaxa fulinta kooxda lagu naaneyso Marwada Duqda ah ee Juventus.
“Intaa kaddib waynu arki doonnaa sidaan u sii socono, balse waqti xaadirkan suuro galnimada uu Morata ku sii joogayo Juventus waa mid daciif ah.
“Wuu ka tagi doonaa Turino wuxuuna dib ugu laaban doonaa Spain.”.
Paul Pogba oo shaki galiyay inuu siijoogayo kooxda Juventus (Muxuu sameeyay?)